Dawladnimo iyo Dagaal Oogayaal Diineed Mid Doorta
Marka laga hadlayo bulsho dawlad la’aan ah, in badanna kujirtay fawdo, baahi, dil iyo dagaal joogta ah, qax, qoxootinimo, bara kac iyo macaluul joogta ah, dadka maskaxdooda waxaa usoo degdega Soomaaliya. Dhibaatooyinkan kor kuxusan waxaa keenay markay burbureen ama aan burburinay hay’adihii dawaladda Soomaaliya. Hadda waxaa jira fursad ah in dib loo yagleelo hay’adaha dawladda, si loo soo celiyo qarannimada Soomaaliya, loona soo afjaro dhibaatooyinkan ragaadiyay bulshada Soomaaliyeed.
Si looga gudbo dhibaatooyinkan dheeraaday ee wajiyada badan leh, waxaan siinayaa talooyin xoogagga iskacaabinta Soomaaliyeed ee sutida uqabtay duulaankii gardarada ahaa ee nidaamka Meles Zenawi kusoo qaaday Soomaaliya. Dawladda Midnimo Qaranna waxaan siinayaa talooyin, bulshada Soomaaliyeedna waxaan siinayaa talooyin.
Xoogagga dawladda kasoo horjeeda ee magaca diinteena Islaamka ee qiimaha badan wata waxaad moodaa in ay leeyihiin dhaqankii dagaal oogayaalkii hore ee ahaa “xabad iyo qori baa xal ah”. Xoogaggii Itoobiya ladagaalamay ee ku qasbay in ay ka cararto Soomaaliya, qaybta qorshaha nabad raadinta iyo dib uheshiisiinta ogol ma’ahee qaybta kale ee diidan dib uheshiisiinta, xabad joojinta iyo wadahadalka waxaa laguboon inay labadan jid midkood raacaan: midi waa wadada dawladnimada loomaro, tan kalana waa wadada Dagaal Ooganimo Diineed loomaro. Labadan jid, midi waa wadada guusha iyo qaran soo celinta, tan kalana waa wadada sii burburka, baaba’a iyo bohol uqodidda bulshada Soomaaliyeed. Wadada dagaal ooganimo loomaro waa jid dheer oo dhib badan, oo isku murugsan oo aan waligii dhamaanaynin, guulla laga gaadhaynin, kan dawlad nimada loomarana waa mid ka gaaban, kana dhib yar wadada dagaal ooganimada. Waa jid meel layaqaanno usocda, lana gaadhi karo, natiijaduna ay tahay nolol, nabad iyo nagaansho waara.
Wadada Loomaro Dawladnimo:
Wadahadal iyo dib uheshiisiin ogalaansho
dhaleecayn fayoow (constructive criticism)
Ilaalinta danta guud
ka danqashada ama kadhiidhiyitaanka dhibaatada bulshada
ogolaanshaha aragtiyada kale
ogolaanshaha in xukunka lawadaago, dhibaatadana isqancin lagaga baxo
garashada ama kasidda inaan dagaalada Soomaaliya lagu kala adkaan karin
garashada xaaladda ka jirta Soomaaliya, Geeska Afrika iyo Aduunka
la imaanshaha qorshe iyo istiraatiijiyad cad oo leh mid dhaw iyo mid fog si loo soo afjaro fawdada dheeraatay
abaabullidda qaybaha bulshada oo dhan iyo dhisidda hay’adaha dawladda (mobilizing the society towards measurable and achievable goals and the institutional building)
Wadada Loomaro Dagaal Ooganimo Diineed iyo Dabeecadaha uu Leeyahay Dagaal Ooge Diineed:
wadahadal ogolaansho la’aan (wadahadal diid)
gaalaynta dadka kaa aragtida duwan
u’aragga dadka kaa aragtida duwan in aynan Muslimiin wanaagsan ahayn
fasirka diinta sidaan anigu u arko kaliya ayaa sax ah
cabudhiska iyo cabsi galinta dadka, gaar ahaan aqoonyahanada, wax garadka, hogamiyayaalka dhaqanka, dumarka iyo culimada diinta
waxyaabaha aan muhiimka ahayn oo xooga lasaaro (sida xusidda mawliidka oo lahoristaago iyo xabaalaha oo laburburiyo)
xaafado qabsasho iyo aagan anigaa xukuma (kataliya)
ka danqasho la’aanta dhibaatada iyo rafaadka haysta bulshada (sida, qaxa, cunto la’aanta, biyo la’aanta, hooy la’aanta, daawo la’aanta iyo rajo baabi’inta)
dagaal ku degdegid iyo wadahadal diidid
in aan isu arko aniga kaliya in aan saxsanahay dadka kale oo dhanna ay qaldanyihiin
danta guud oo laga hormariyo danta gaarka ah ee qofka iyo kooxda
badinta eedaynta, far ku fiiqidda, shakiga iyo shir jaraaid qabashada si la’iibarto
garasho la’aanta xaaladda ay Soomaaliya iyo caalamku marayo maanta
rayadka iyo xaafadaha dhexdooda ku dagaalanka in lagu magacaabo jihaad
in Muqdisho oo nabad ku seexatay seqda dhexe hoobiyayaal iyo gantaalo lagu gaaraco, kadibna shir jaraaid laqabto oo lagu doodo cawgii Ilaahay iyo ciidamo shisheeye ayaan ladagaalamaynay, kadib markay dagaalka ku nafwaayeen ama ay ku dhaawacmeen boqolaal rayad ah
in aan dad nabad ku baryay/ku soo toosay gantaalo lagu garaaco, la laayo, dhiigooda la daadiyo, sababna loo noqdo dad aan dambi galin in lagumaado, gantaalo habaw ahna guryahooda ku habsadaan, masuuliyadda dilkoodana cidna aynan qaadanin, waxa lagu hadlaana uu noqodo oo kaliya “jihaadka waan siiwadeynaa”
in dawladda lagu eedeeyo inay ciidamo shisheeye ku hayso dalka, laguna faano waxaa noo yimid walaalo Muslimiin ah oo ajnabi ah oo mujaahidiin ah, kuwa noo imaan doonana waan soo dhawaynaynaa
Musliimiin isdirirtay in lagu faano oo layidhaahdo cawgii waan jabinay, cadawgii Ilaah baa guushii naga siiyay
badinta erayada jihaad, mujaahidiin iyo shareecada ayaga oo aanan midna macnahooda dhabta ah garanaynin, aqoonteedana lahayn.
Waxaan sifiican u aqaanaa (hadaan ahay dagaal ooge diineed) sida dagaalka, rabshada, dilka iyo cabsida iyo argagaxa loo sii wado, loona abaabulo, ma aqaano, qorshaheedana mahayo sida nabadda loosoo celiyo, bulshadana qalbigeeda loo hanto iyada oon waxba xoog lagu marsiinin
ku badinta carabka dagaaalka waan sii wadaynaa, dagaal baan diyaar unnahay, iyo ka ilaalinta carabka nabada waan soo celinaynaa, nabad baan diyaar unnahay.
ruux aan dabmi galin ama aan dambi lagu cadeynin intii la gawraco sida xoolihii in layidhaahdo waxaan dillay munaafaq, gaal, jaajuus, cadawgii Ilaahay iyo wixii lamid ah
waxyaabaha dhabta ah (realities) ee jira oo laga boodo
aniga oo xaafad xaafadaha Xamar kamid ah haysta, dhawr tignika ahna wata in aan isu arko in aan ahay qofka ugu awooda badan aduunka
in aan umaleeyo xidhashada cumaamadda guduudan ee bariga dhexe laga xirto iyo surwaalka Hindida iyo Pakistanidu ay xirtaan in ay yihiin labiskii diinta Islaamku nafartay in laxirto
ku dayashada nimanka buuraha Afqaanistaan ku dhuumanaya iyo kuwa Ciraaq ka dagaalamaya, sida gowaricidda dadka, qarxinta suuqyada, argagixinta bulsho nabad kusoo toostay iyo dilka dad aan wax dambi ah galin
waxaan khabiir ku ahay, in dadka la karbaasho, muranka, ka doodidda arimaha diinta aniga oo aanan aqoon ulahayn iyo badinta erayada “waa xaaraan, waa gaal, waa murtad, waa faasiq, waa jaajuus, waa mulxid, waa cadaw Ilaahay, waa cilmaani”
waxaan ku caan baxay khabiirna ku ahay qori ku hadalka (qori ku dagaalanka)
waxaan ku xumahay, rabinna, kana gaca jiidayaa wadahadalka iyo xabad joojinta
waxaan ka dhago la’ahay dawladi waxa ay tahay, sida ay dawladi ushaqayso, wada shaqaynta, wada hadalka, maamul samaynta, nimaadinta, isdhexgalka bulshada, isutaasulidda, iyo la imaatinka istiraatiijiyad fog si looga boxo fawda dheeraatay
waxaan caan ku ahay aragti gaabni, fududi, khibrad yari, aqoon yari iyo islawayni ismana ogi (ma garanayo in aan sidaas ahay)
waxaan caan ku ahay tayda umbaa sax ah
waxaan caan ku ahay cunidda kaalmada gaaladu keento, waxaa kale oo aan caan ku ahay eedaynta galaada oodhan iyaga oo aanan lakala reebin
waxaan caan ku ahay waxaas iyo waxyaabo kale
Dawladda Maxaa Lagudboon/Laquman?
Maa daama ay hay’adiihii dawladda Soomaaliya oo dhan burbureen waxaa dawladda looga fadhiyaa inay geed gaaban iyo mid dheere ufuusho, talaabo kastana uqaado sidii xoogagga kasoo horjeeda miiska wadahadalka loo keeni lahaa, looguna qancin lahaa dagaal sii socda in aynan bulashada Soomaaliyeed wax dan ah ugu jirin. Dawladda waxaa looga baahanyahay in ay afar aag ka howl kagasho, si loosoo celiyo kala dambayntii, iyo hanaankii dawladnimo. Afartaa aag oo kala ah: dib ushiisiinta, dardar galinta ciidanka dawladda, wacyi galinta bulshada iyo taageero dhaqaale uraadinta barnaamijyada dawladda.
Dawladdu waa inay ku talaabsataa dib uheshiisiin qorshaysan oo joogta ah. Dawladdu waa inay diyaar unoqotaa in ay lahadasho qof kasta iyo koox kasta, dawladdana laga qayb galiyaa kuwa qaata nabada joojiyana colaadda. Did uqaabaynta iyo qalabaynta ciidanka qaranka waa in ay noqotaa laf dhabarta barnaamijyada dawladda, si loo helo ciidan suga nabada iyo kala dambaynta. Waxaa kale oo lagama maarmaan ah abaabulka iyo wacyi galinta bulshada, gudo iyo dibadba. Dawladdu waa inay qorshadeeda ku saaban dib uheshiisiinta iyo guud ahaanba barnaamijyada kale dadka usheegtaa, ka codsataana inay dawladda isgarab taagaan, taageeraan, lashaqeeyaan, kaalmeeyaan lataliyaan, si siwada jir ah dawladda iyo bulshadu gacmaha isu qabsadaan, si dhibaatada culus ee jirtana siwada jir ah looga gudbo.
Xoogagga Dawladda Kasoo Horjeeda Maxaa Lagudboon?
Xoogagga dawladda ka soo horjeeda waxaan kula talinlaahaa inay sifiican indho dheer ugu eegaan dhibaatada dawlad la’aanta ah ee Soomaaliya ku habsatay 18-kii sano ee lasoo dhaafay. Bulshadeenu maanta dhiig joojin bay ubaahantahay ee dhiig daadin uma baahna. Dib udhis bay ubaahantahay ee burburin uma baahna, dib udajin bay ubaahantahay ee barakac iyo qax horleh uma baahna, dawlad iyo kala dambayn bay ubaahantahay ee fawdo, dagaal ooganimo, duqayn aan dhamaan, dil joogta ah iyo dad macaluul udhimanaya umabaahna. Jihaadka dhabta ah ee ay tahay inay qaadaan kooxaha kasoo horjeeda dawladda waa jihaadka did u heshiisiinta, nabadaynta, dhiig joojinta, macaluul baabi’inta iyo qarannimo soo celinta. Hadii aad ogolaataan qorshaha nabad raadinta, ka qayb qaadataan did uheshiisiinta, joojisaan dhiiga daadanaya iyo dilka, qorshaha qarannimo soo celintana aad taageertaan, bulshada Soomeeliyeed abaal aad uwayn bay idiin hayn doontaa, taariikhdana baal dahab ah ayaad kagalaysaan, Allaah na ajir aad uwayn buu idinsiin. Aduun iyo aakhiraba waad guulaysanaysaan, maxaa yeelay bulsho burburtay oo 18 sano dagaalo ku jirtay ayaad qarannimo soo celinteeda kaalin weyn ka qaadateen, magaca Soomaali-na korbaad uqaadeen. Hadii aad wadadaa mariwaydaan oo idinka oo magac diineed wata dagaal oogayaal u xuubsiibataan, halis hor leh oo aan la qiyaasi karin baxaddeeda oo isugu jirta faragalin shisheeye oo hor leh, dagaal sokeeye oo hor leh oo udhexeeya kooxo magac diineed wata oo dhamaan magacooda uu kujiro magaca Islaam, koox kastana kooxda kale gaalaysiinayso, koox kastan sheeganayso inay iyadu xaqqa ku taagantahay, macaluul joogta ah iyo burbur hor leh ayaad dalka iyo bulshada usoo jiidaysaan. Meeshaas waxaa ku baabi’i magacii diinta Islaamka, magacii culimada iyo magacii Soomaali nimada.
Bulshada Soomaaliyeed Gudo iyo Dibadba Maxaa Lagudboon?
Qurbajoogta Soomaaliyeed iyo dadka gudaha dalka ku nool labada waxaa looga baahanyahay inay taageeraan qorshaha nabadda, u ololeeyaan isgarab istaagaanna qorshaha nabad raadinta, abaabulaanna malaayiinta nabadda u ooman ee iska aamusan ee aanan haysanin fursad codkooda ay ku maqashiiyaan xoogagga wali gantaalada dadka ku garaacaya. Waa inay codkooda ku biiriyaan codadka isa soo taraya ee nabad raadinta iyo dib uheshiisiinta ku baaqaya. Cod wada jira waa in aan ku dhahnaa, dagaal diidnay, nabad doonnay. Dagaal ooge diin sheegan oo nabad diid ah diidnay, dawladnimo doonnay. Duqaynta dadka diidnay, dadaalo wadahadal iyo dib uheshiisiin doonnay. Dhiig daata diidnay, nin aan danta dadka doonaynin diidnay. Duqaynta Xamar diidnay, daris walaalo ah oo nabad ku dagan doonnay. Dalkeena oo nabad ah doonnay, dagaal sokeeye diidnay. Diidnay, diidnay, diidnay, dhiig daata diidnay. Diidnay, diidnay, diidnay, duqayn aan dhamaan diidnay. Diidnay, diidnay, diidnay, dawlad la’aan diidnay. Diidnay, diidnay, diidnay, dagaal aan dhamaan diidnay. Doonnay, doonnay, doonnay, dalkeena oo nabad ah doonnay. Doonnay, doonnay, doonnay, dawladnimo iyo dadkeenoo nabad ku degan doonnay.
Email : soomaali100@yahoo.com